कुराको इन्टरनेट के हो? यो मार्केटिंगको अर्थ के हो? | Martech Zone
कुनै पनि उपकरणको लागि इन्टरनेट कनेक्टिभिटी वास्तविकतामा परिणत भइरहेको छ। हाम्रो निकट भविष्यमा यसले ठूलो डाटा र बजारमा ठूलो भूमिका खेल्ने छ। गार्टनरले २०२० सम्म भविष्यवाणी गरेको छ इन्टरनेटमा जम्मा २ Internet अरब उपकरणहरू छन्। ] = [op26-0y9q6
कुराको इन्टरनेट के हो
चीजहरूले चीजहरूलाई दर्साउँदछ जुन हामी सामान्य रूपमा जडान भएको जस्तो कल्पना गर्दैनौं। चीजहरू घरहरू, उपकरणहरू, उपकरणहरू, सवारी साधनहरू वा व्यक्ति हुन सक्छन्। व्यक्तिले मानिससँग सम्पर्क राख्दछ, व्यक्तिले चीजहरूमा जडान गर्दछन्, चीजहरू मानिससँग जोड्दछन्, र चीजहरू अगाडि बढिरहेका चीजहरूमा पनि कनेक्ट हुनेछन्।
विकिपेडिया परिभाषा हो:
इन्टरनेट अफ थिंग्स (IoT) भौतिक वस्तुहरू वा "चीजहरू" को नेटवर्क हो जुन इलेक्ट्रोनिक्स, सफ्टवेयर, सेन्सर र कनेक्टिविटीको साथ इम्बेडेड हुन्छ, यसलाई अधिक मूल्य र सेवा प्राप्त गर्न सक्षम गर्नका लागि निर्माता, अपरेटर र / वा अन्य जडित उपकरणहरूसँग डाटा साटासाट गरेर। प्रत्येक चीज यसको एम्बेडेड कम्प्युटि system प्रणाली मार्फत विशिष्ट पहिचान गर्न सकिन्छ तर अवस्थित ईन्टरनेट पूर्वाधारमा अवरोध गर्न सक्षम छ।
अवधि कुराको इन्टरनेट १ 1999 XNUMX। मा बेलायती प्रविधि अग्रगामी केभिन एस्टनले लेखेका थिए।
चीजहरूको इन्टरनेट (IoT) ले हामी अधिक आन्तरिक जडित संसारमा व्यवसाय चलाउने र जानकारीलाई आत्मसात गर्ने तरिकामा प्रमुख भूमिका खेल्नेछ। तर के हामीसँग आईओटीको पूर्ण क्षमतामा पुग्नको लागि सही पूर्वाधार छ? र के हामी डिजिटल मार्केटिंगमा यसको बेवास्ता लाभहरू अन्वेषण गर्न पूर्ण रूपमा निपटिएका छौं? यसको बारेमा अधिक जान्नको लागि यो इन्सिसिभ इन्फोग्राफिकमार्फत जानुहोस्। मुहान: स्थिति-
MindFrame मा मान्छे द्वारा पोष्ट गरिएको, यो भिडियो IBM को बाट इन्टरनेट को भविष्य मा एक उत्कृष्ट नजर हो एउटा चलाख ग्रह, उपकरणहरू इन्टरनेट प्रयोग गर्दै, र डेटाको समुद्रको साथ यस ग्रहमा हाम्रो भविष्यमा विचारहरू। जब हामी इन्टरनेटमा १ अरब प्रयोगकर्ताहरूबाट द्रुत रूपमा २ अर्बमा बढ्दै छौं, उपकरणहरूको संख्या अझ छिटो दरमा बढ्दैछ। मेरो आफ्नै परिवारमा मसँग २ व्यक्ति छन्, तर कम्तिमा एक दर्जन उपकरणहरू!
यसले मार्केटर्सलाई कसरी प्रभाव पार्छ? डाटाको हरेक बाइट जुन तपाईंको बाट क्याप्चर गरियो कुरा तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु राम्ररी बुझ्न मद्दत गर्न सक्दछ ताकि तपाइँलाई थाहा छ कुन सन्देशमा कुन ग्राहकलाई सही समयमा धकेल्नु पर्छ। हाइपर-लक्ष्यीकरण (पनि मार्फत कुरा) मार्केटरहरूले अन्तर्क्रियात्मक जन विपणन रणनीतिहरूको लागि कम कम आवश्यकताको साथ संचार अधिक प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ।
टैग: 2020एउटा चलाख ग्रहगार्टनरकुराको इन्टरनेटiotकेविन एष्टनमाइन्डफ्रेम